रुपैयाँको रफ्तार - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ वैशाख २३ गते २०:१६ मा प्रकाशित
आज रुपैयाँको रफ्तार अवतार बनेर आएको छ । त्यसै गरी रुपैयाँ यसरी उफ्रंदै छ कि कहिँ कसैको आग्रह विनानै व्यग्रता वनाई नाम कमाई आसन जमाई रहेको छ । रुपैयाँलाई रोक्न भारी बोक्नु पर्छ । चाहे त्यो सारीको किन नहोस चाहे सारे दुनियाँको खुलाहावामा दिन दहाड पहाड वनी उभिने इमानदारीको भारी फाली रुपैयाँ बोक्न इज्यत पोख्न,मान प्रतिस्ठालाई ठोक्न रुपैयाँ तयार छ । दुनियाँ रुपैयाँको रफ्तारलाई दफ्तराँ दोवार्न, सेफाँ सपार्न, बैकाँ थुपार्न, मनाँ मुसार्न दौडिरहेको रुपैयाँ रुपी पोखरिया पौडिरहेको छ ।
यसै बिषयाँ पं गौरी शंकर द्दारा लिखित महाभारतमा विदुर धृतराष्ट्र संवाद धुत-भवन निर्माण पाण्डव आगवनको एउटा श्लोक ११ अौ अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
गर्छौ जुन धनले अनेक थरिका, सत्कर्म हामी यहाँ ।
गर्दै छौ धन खोस्न सोहि छलका, बार्ता वृथामा यहाँ ।।
मान्दैनन कहिले पनि असल क्वै, यो धुत क्रिडा कन ।
हे मामा ! तिमी नित्य तत्पर रहु, यो वृत्ति त्यागिदिन ।।
पौराणिक कालाँ हजारौ बर्ष अगाडिको हाम्रो पुर्खा पालाँ पनि रुपैयाँको रफ्तार दफ्तराँ हुलाउन, सेफाँ फुलाउन ढुकुटिमाँ भुलाउन र मनाँ डुलाउन दौडिरहेका रुपैयाँ रुपी पोखरियाँ पौडेर जुवा रुपी महाशक्तिको अस्त्रले द्रौपडिको बस्त्र खुस्काइ दियो । त्यसैले त महाभारतको अस्त्रा बाटो खुलाई हस्तिनापुरलाई त्रस्त पारि दियो । रुपैयाँकै रफ्तारले भाइ वन्धुमा युध्दको रङ रंगाइ दियो । महाभारतको दुनियाँ इष्ट मित्र भाइ बन्दुलाई दुई चिराँ वंगाइ दियो ।
आज हेर्नुहोस त यो रुपैयाँले पनि क्षेपाराले झैं रंग फेरेको समाजाँ बुध्दिजीवि, ठूला ठूला साहु महाजन व्यापारी, समाज सेवी, नेतागण, कर्मचारी र जनता जनार्जका माझ चमत्कार बनेर कार्डको रुपाँ घेरेको म छुन्न भन्नेलाई यसले फेरेको र हाम्रो मन मस्तिष्क र ढुक ढुकि यसले छिन छिनाँ घेरेको । त्यतिले मात्रै कहाँ हो र हाम्रो धडकन र रगतका छिर्का छिर्का पिर्का बनेर यसले स्थाइ बसोबास गरेको ।
आजकाल त हजुर बिहान देखी बेलुका सम्म,राती देखी बिहान सम्म चौबिसै घण्टा, बाह्रै काल, बाह्रै मास कसैको चर्चा हुन्छ भने रुपैयाँकै रफतारको । कोही दौडिन्छ कसैले कसैलाई बोक्छ, कसैले कसैलाई ठोक्छ, कसैले कसैलाई रोक्छ, कसैले कसैलाई छेक्छ, कसैले कसैलाई ढोग्छ भने पनि त्यही रुपैयाँको रफ्ताराँ । खानुहुन्छ रुपैयाँकै रफ्ताराँ, जो सँग कुरा गर्नु हुन्छ रुपैयाँको रफ्ताराँ । जसले तपाईंलाई हेर्छ रुपैयाँकै रफ्ताराँ, त्यसैले आज दुनियाँ कसैको दम छ भने दमडिकै दम छ,रूपैयाँ रफ़्तारमै मान्छे गम्च । दुनियाँ दमडिकै दमले चलेको छ त्यसैले रुपैयाँको रफ्तार भनेकै दमडिको दमको भाऊ हो, रूपयाँकै रफ़्तारको दाऊ हो,दुनियाँले पक्डने यसैको पाउ हो,यो त बाऊको पनि बाऊ हो ।
अरु त अरु चुनावकै कुरा गरूँ, चुनावाँ देशले कत्रो बजेट छुटयाउँछ ? नेताले त्यसैको लागित जम्मा गर्छ ,खर्छ गर्न, जम्मा गर्नै पर्यो, खर्च गर्ने पर्यो,एउटा त टर्यो अर्काको लागि हेर्नै पर्यो ।
विद्यार्थी ले जती धेरै रुपैयाँको रफ्ताराँ पढछन् त्यती ठूलो बिध्वान बन्छन् । पहिला खर्च गर्ने पछी खर्च गरेको व्याज देखी स्याज सम्म उठाउने यो त दुनियाँको चलनै हो । यो त संसारको सपनाको देश हो, रुपैयाँको रफ्तारलाई आँफ्नो दफ्तराँ डलर बसाउने रेशको देश हो । यो त संसारकै देश र जनताको डलराँ कलर फेर्ने एक्स्प्रेश हो । यहाँ त डलर कमाउने रित भित्रको प्रित छ ईमान, जमान, नात,पात,भाइ साथी आफन्त सबै डलराँ विक्छ,सत्य भन्दा अरूनै वढी टिक्छ । रूपयाँको रफ़्तार त दुनियाँलाई अधिनाँ बसाउने डलराँ कसाउने आधुनिक अप्सर हो ।
चुनावाँ उठन पनि रुपैयाँ रफ्तारको रफ्फा दफ्फा बनाउन जान्यो भने वफादार नेता भइन्छ । दुनियाँ कहलाईन्छ ,आत्मलाई वहलाईन्छ,ईमानदारीलाई तहलाईन्छ । जता जता चर्चित नेता छन् त्यता त्यता रूपयाँको रफ़्तारले रूवाईन्छ । त्यसरीनै रुपैयाँ रफ्तारले रंगाइ दियो भने बफादार उमेदवार मात्रै होइन,तालीको गड़गड़ाहटले दिन दुखी दुनियाँलाई फाली लगाइन्छ । त्यसपछी त चुनावाँ असल समाज सेवी कहिन्छ । चाहे समाजाँ यस अघी लागियोस चाहे नलागिअोस चाहे बोल्न जानियोस चाहे नजानीयोस चाहे क्षमा होस चाहे नहोस दमडिको दमले सबैलाई भ्रम खुवाइ दिन्छ ।
त्यसैले रुपैयाँको रफ्ताराँ अवतार लिएर त हेर्नु होस् । रुपैयाँको रफ्तार बुध्दिजीवी भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार, समाज भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार, विधा भन्दा ठूलो रुपैयाँको रफ्तार, देश भन्दा ठुलो रुपैयाँको रफ्तार,भाषा भन्दा ठुलो रुपैयाँको रफ्तार, संस्कृत भन्दा ठूलो रुपैयाँको रफ्तार, आँफन्त भन्दा ठूलो,रुपैयाँको रफ्तार बुवा भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार आमा भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार भगवान भन्दा ठूलो, रूपयाको रफ़्तार इमान भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार, जमान भन्दा ठूलो, रुपैयाँको रफ्तार इज्यत भन्दा ठूलो,रुपैयाँको रफ्तार जीबन भन्दा ठूलो, सान्च्चै भन्ने हो भने रुपैयाँको रफ्तार भगवानको अवतार भन्दा ठूलो ।
किन भने रुपैयाँको रफ्तारले यि सबै कुरा छोडेर मान्छे कहाँ पुगेको छैन भन्नु होस् त ? रुपयाँको रफ्तारले दुनियाँको मन बोकेर समाजाँ अन्याय छोप्छ आफ्नो पन तोड्छ समाज फोड्छ । यो रुपैयाँको रफ्तारले ‘ म नेता हुँ ‘ भन्यो भने पनि ठीक भन्नै पर्छ, ‘म समाज सेवी हुँन्छु’ भन्यो भने पनि बनाइ दिन्छ । रुपैयाँको रफ्तार भनेकै दमडिको दम हो । दमडिको दमले सारा संसाराँ म भन्ने सबैलाई गम खुवाइ दिन्छ । त्यसैले हामी सबैले मान्नै पर्छ रुपैयाँको रफ्तारले भगवानको अवतारलाई पनि पक्षार्न सक्छ त्यसैले ” जय रुपैयाँको रफ्तार ” रुपियाँको रफ्तारले चुनाव कब्जा गर्छ । देशको चुनावाँ रुपैयाँको रफ्तारले बुथ कब्जा गर्छ । वुथले युथ,युथले बल यसरी पुरै देश अनी समाज अनी संघ संस्था अनी जता हेर्यो त्यतै कब्जै कब्जा । ‘ रूपयाँको रफ़्तारले भगवानको अवतारलाई सजिलै दफ़्तराँ दोव्राउन सक्छ ‘ । त्यसैले सबैले भनौ रूपयाँको रफ़्तार हेर्न लायक अवतार नयाँ युगको वफ़ादार ।